गाडी बीमा | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: स्वत: बीमा
के म 1 महिनामा CTP बनाउन सक्छु? कृपया मलाई भन्नुहोस्। वा सबैभन्दा न्यूनतम अवधि
के म १ महिनाको लागि MTPL बनाउन सक्छु? कृपया मलाई बताउनुहोस् वा न्यूनतम अवधि न्यूनतम अवधि पारगमन बीमाको लागि २० दिनसम्म हुन्छ (वार्षिक नीतिको लागतको २०%)। मात्र ...
के यो एक ट्र्याक्टर र अन्य कृषि उपकरणमा CTP बनाउन आवश्यक छ?
के ट्र्याक्टरहरू र अन्य कृषि मेशिनहरूमा ओएसएजीओ गर्न बाध्य छ? अनिवार्य हो अनिवार्य बीमा कानून द्वारा निर्धारित छ। OSAGO बिना, तिनीहरू ट्राफिक पुलिसमा दर्ता हुने छैनन्। Months महिनाका लागि बीमा लिनुहोस्, ...
सीटीपीमा क्षतिको स्थितिमा बीमा कम्पनीमा कागजातहरू पेश गर्नका लागि म्यादको के हो?
ओएसएजीओ अन्तर्गत बिमा भएको खण्डमा बिमा कम्पनीमा कागजात बुझाउने अन्तिम मिति के हो? जहाँसम्म मलाई याद छ यो सम्झौता पढ्नुहोस् days दिन जति टाढा मलाई याद छ - दुर्घटनाको क्षणदेखि १ working कार्य दिन, ...
ओएसएजीओ को लागि मुद्रा फिर्ता वास्तव मा?
के ओएसएगओको लागि पैसा फिर्ता गर्न सम्भव छ? तपाईं केवल पैसा फिर्ता गर्न चाहनुहुन्न ... उनीहरूको टाउको तैरिरहेको छ !! ! खरीद र बिक्रीको मितिबाट फर्कनु पर्छ। मद्दत खाता पर्याप्त छ। र मेरो मामलामा, तिनीहरूले मलाई एक रोजगोस्ट्रख कार्ड जारी गरे ...
Tver शहरको नाम के थियो?
Tver शहरको नाम के हो? कालिनिन, म ग्रेड १ क्यालिनिनमा गएँ, तर यस Tver को लागी Tver थियो ... Tver (१ 1 19311990११ 769 in मा काली # XNUMX XNUMX;; निन) रूसको शहर हो, अवस्थित ...
कहाँ CTP अनलाइन खरीद गर्ने? म Rosgosstrakh गए, त्यहाँ अनन्त कामहरू छन्, RESO मा पनि काम गर्दैन।
OSAGO अनलाइन कहाँ किन्ने? म रोजगोस्स्ट्रकमा गएँ, तिनीहरू निरन्तर त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, र RESO ले पनि काम गर्दैन। Xs CO ग्यास पनि काम गर्दैन? Tinkoff बीमा सबैको लागि यति छ कि कसैले पनि ...
मस्कोमा कति एयरपोर्टहरू छन्? र उनीहरूलाई के भनिन्छ?
मस्कोमा कतिवटा एयरपोर्टहरू छन्? अनि तिनीहरूलाई के भनिन्छ? 4- Vnukovo, Bykovo, Sheremetyevo, Domodedovo। झुकोभस्की अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टले २० जून, २०१ on मा काम सुरु गर्नेछ। र सैन्य कर्मीहरूको गुच्छा: मोनिनो, कुबिन्का, झुकोभस्की। र ...
के यो बीमा बिना बीमाको दर्ता गर्न सम्भव छ? र यसको लागि पुलिसहरू पाउनु हुँदैन?
के म बीमा बिना कार दर्ता गर्न सक्छु? र पुलिसहरू यसको फेदमा पुग्दैनन्? डायग्नोस्टिक कार्डहरूको बिक्री (प्राविधिक निरीक्षण) प्राविधिक निरीक्षण अनलाइन हामी दुई बर्ष भन्दा बढी देखि रूस मा काम गर्दै छौं र ...
के म मालिक बिना गाडीको लागि बीमाको व्यवस्था गर्न सक्छु?
के म मालिक बिना कारको लागि बीमा लिन सक्छु? होईन, तपाईं बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न अटर्नीको पावर बिना। तपाईं कारको मालिक बिना सबै कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ अटर्नीको पावरको आधारमा मात्र। समस्या छैन। यो प्रविष्टि हुनेछ ...
एएए नम्बरहरूले के सुविधाहरू दिन्छ? कति छ? गम्भीरतापूर्वक कृपया .... धन्यवाद
एएए नम्बरहरूले के सुविधाहरू दिन्छ? कति छ? गम्भीरतापूर्वक कृपया .... धन्यवाद, जहाँ Vyborg मा छ, तब लगभग 20-30 टुक्रा r मा निर्भर गर्दै। तर मँ A *** AA लिन भन्न सक्दिन, रातो लिनको लागि यो उत्तम छ ...
गाडीको लागि अटार्नीको सामान्य शक्ति के हो? र कुन व्यक्तिले यो मेशिनको लागि के गर्दछ?
कारका लागि साधारण पावर अफर्नी के हो? र एक व्यक्तिसँग यस कारमा के अधिकार छ? पहिले नै त्यहाँ बीमा मा समावेश गर्न त्यस्तो कुनै आवश्यकता छैन! अटर्नी वा notarized को सामान्य शक्ति, एक अवधारणाको रूपमा ...
एउटा दुर्घटनामा त्यहाँ एक अदालत थियो जसले द्वन्द्व उल्लङ्घन गर्यो। कसलाई क्षति पुर्याउनेछ?
दुर्घटनामा पर्‍यो ... त्यहाँ अदालत थियो, एक आपसी उल्ल violation्घनलाई मान्यता दियो। कसले क्षति तिर्ने? यदि दुर्घटनामा चालकहरूको आपसी गल्ती छ भने, सवारीलाई हुने 50०% क्षति मौद्रिक क्षतिपूर्तिको विषय हो। किनकि त्यो…
ओएसएजीओ विस्तारित - यो के हो?
ओएसएजीओ विस्तारित - यो के हो? यदि दुर्घटना तपाईंको गल्ती हो र भुक्तानी सीमा १२०t नाघ्यो। आर त्यसो भए जेबबाट बाहिर भिन्नता भुक्तान गर्नुहोस्। तर विस्तारबाट। म सल्लाह दिन्छु, राम्रो ...
इन्गोस्स्ट्रख ओएसएजीओ को भुक्तानी को बारे मा बुझयो
Ingosstrakh अनिवार्य मोटर तेस्रो पक्ष दायित्व बीमा को लागी भुक्तानी को कम महत्त्व दिईएको छ पैसा प्राप्त गर्न को लागी धेरै सम्भव छ, तर यो तपाईको सबै न्यायिक बोझमा संलग्न हुनु धेरै धन्यवादी व्यवसाय हो। मसँग त्यस्तो अनुभव थियो, म फेरि दोहोर्याउँदिन।
मलाई बीमा बीमामा फिट गर्नको लागि वकीलको सरल हस्तलेखन शक्तिको नमूना बताउनुहोस्
MTPL बीमामा समावेश गर्न एक साधारण हस्तलिखित पावर अफरनीको नमूना प्रदान गर्नुहोस् तपाईलाई बीमामा प्रवेश गर्नको लागि कुनै पनि वकीलहरूको आवश्यकता छैन। मालिक आफैले त्यसमा प्रवेश गर्ने छ। Yandex जानुभयो र लेख्नुहोस् "एक सरल हस्तलिखित शक्ति को एक वकील को नमूना ...
कारमा कुनै बीमा छैन भने के राम्रो छ
के ठीक छ यदि गाडीमा बीमा छैन भने हरेक ट्राफिक रोक्ने ठाउँमा r००r थियो म भन्छु, यो पदयात्री हुनु राम्रो हो) तपाईं ड्राइभर बिरामी व्यक्ति हुनुहुन्छ। टिभी मेट्रो तपाईं केटीगुट डोजे पढ्ने केटाहरूसँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ ...
डीपीपीको नीति के हो, र यो के हो?
डीजीओ नीति के हो, र यो केको लागि हो? डीजीओ अनिवार्य नागरिक दायित्व बीमा को लागी दायित्व सीमा को विस्तार हो, कि, यदि तपाईं आफ्नो गल्ती संग भुक्तानी १ 140० हजार बाट विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ भने ...
दुर्घटना पछि एक स्वतन्त्र परीक्षा कसले गर्यो?
दुर्घटना पछि कसले स्वतन्त्र जाँच गरे ?! वर्तमानमा, यससँग कुनै समस्या छैन। अदालत पीडितहरूको पक्षमा छ र बीमा नगद भुक्तानी, खोया र अन्य सुखद चीजहरूबाट स collect्कलन गर्दछ।
बीमामा एक व्यक्ति लेख्न कति खर्च गर्छ?
एक व्यक्तिको बीमामा प्रवेश गर्न कति खर्च हुन्छ? केवल अनुभवमा निर्भर गर्दछ, तर हर्सपावरमा पनि, र तपाईंले निवास अनुमति लिनु हुँदैन यदि ड्राइभर पनि अनुभवी छ र उसका सहगुणहरू छन् भने ...
यदि तपाई एक कार बेच्नुहुन्छ भने तपाईले बिक्रीको खरिदका लागि एक अनुबंध लेख्नुहुन्छ, पीटीका लागि साइन इन गर्नुहोस्,
के गर्ने यदि तपाईं कार बेच्नुहुन्छ, खरीद सम्झौता लेख्नुहोस्, TCP मा साइन इन गर्नुहोस्, यदि तपाईं विक्रेता हुनुहुन्छ भने। १. तीन प्रतिलिपिमा सवारी साधन बिक्री र खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्, एक तपाईंको लागि र दुई खरिददारको लागि ...
105 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 2,337 प्रश्नहरू।